Maika ny fiverenana amin'ny fototra maha-malagasy -
Posted on: July 31, 2017 Written by: Tiasoa Categorized in: Culture et sport
Anisan’ny firenena manankarena mpanakanto i Madagasikara. Mbola azo lazaina fa tsy mivelatra anefa ity sehatra iray ity. Maro ihany koa ireo mpanakanto no mbola tsy mahaleo tena tanteraka. Hatreto, ireo mpanakanto mitondra ny mozikany any ivelany no tena mitrandraka ny maha Malagasy. Ireo vao misondrotra kosa, mihazakazaka maka tahaka ny an’ireo vahiny. Tsy misy afa tsy ny fiverenana any amin’ny fototra ihany anefa no antoky ny fampandrosoana raha ny nambaran’i Rajery, mpanakanto mivohy ny gadona ba gasy. Ankoatra ny fitaovana sy ny ho enti-manana, mbola olana eto Madagasikara ny fahavitsian’ny olona liana amin’ny kolontsaina nentim-paharazana. Raha ny zava-misy tokoa mantsy, ny vahiny no tena liana amin’izay fitrandrahana ny maha izy ny tena izay. Ho fanandratana ny mozika Malagasy ary, hisy ny fifaninanana mozika netim-paharazana mandritra ny hetsika “Festival Angaredona”. Tanjona amin’izany ny hanasongadinana sy hanomezana vahana ny kolotsaina Malagasy, fa indrindra hisintonana sy hitarihana ireo mpanankato vao misondrotra handala izany. Ho hita taratra mandritra ny fifaninana araka izany ny kolotsainan’ireo foko 18.
Tsy hita taratra amin’ny kilalaon’ireo ankizy sy tanora mipetraka an-tanan-dehibe ihany koa ny kilalao nentim-paharazana. Tafiditra ao anatin’izany ny fanorona, izay kilalao mampiavaka ny Malagasy. Efa nilalao azy ity hatramin’ny mpanjaka Andrianampoinimerina. Anisan’ny manafoana ny kilalao taloha ny tsy fandriampahalemana. Manjaka ny fakana an-keriny sy ny fangalaran-jaza ka aleon’ireo Ray aman-dreny mividy kilalao holalaovin’ny zanany ao an-trano, hany ka variana amin’ireo kilalao vahiny toy ny “jeux-videos” ireo ankizy sy tanora. Eo ihany koa ny fahateren’ny tokontany ka tsy ahafahan’ireo ankizy milalao. Mandritra ny angaredona , hisy ny fampilalaovana ireo ankizy madinika. Ho hita mandritra izany ny hazakazaka kodiarana sy kalesa, ny tongon-kazo sy ireo kilalao samihafa manasongadina ny maha Malagasy. Ireo ankizy 6 hatramin’ny 13 taona no afaka mandray anjara amin’izany.
Hotanterahina ny 01 hatramin’ny 06 aogositra ny hetsika Angaredona andiany faha 14 izay atao any Ambositra. Mandritra izany, hisy ny fampiratiana ireo karazana zava-maneno. Mpanankato 25 no hanafana ny lanonana mandritra ny 3 andro.
Tagged as: angaredona kolontsaina mahamalagasy mozika
Previous post Nifarana omaly ny « Festivanille-Satrahagna »
Next post Nouveau refuge pour enfants victimes d'abus sexuels à Nosy-Be
0 comments on “Maika ny fiverenana amin'ny fototra maha-malagasy” Add yours →